Search မြန်မာနို့စို့ချောင်းရိုက် - BajarFB.com
Search Results - မြန်မာနို့စို့ချောင်းရိုက်
စ​ကေးကြမ်းချက်​..9​လောက်​ရှိတယ်​.. Aye Min Htut 28 Jul 2018 · 199K views
#မြန်မာ ချောင်းရိုက် #ဗီဒီယို ! ရိုးရိုး ပစ်မလား ? လောင်ချာ နဲ့ထုမလား ? ☎️ ဖုန်းနံပါတ် -09 256070900 , 09 73206348 ============================ 💢 မှတ်ချက် ။ ။ အွန်လှိုင်းပေါ်မှာ အွန်လှိုင်း လမ်းဘေးဈေးသည်တွေ ရောင်းနေကြတဲ့တရားမဝင် လေလုံးထွား ကြီးဆေး တောင်ဆေး ကြာဆေးတွေ အကုန် လုံးဝယ် သုံးကြည့် ပြီး သင့် ချွေးနည်းစာတွေကို ဖြုန်းပြီး ရောဂါ မျိုးစုံ ရအောင် အရင်ရှာပြီးမှ . . . . . 🧡💛 ဒီဆေးတွေကို သုံးကြပါနော် ! 💛🧡 😌😌 ဆီ နဲ့မြောင်းပုတ်ရေ ဘယ်လောက်ကွာလည်း ဆိုတာ ပိုသိသာသွားပါ လိမ့်မယ်နော် ! 🤮🤮 ❌🤔နာမည်ကြီး ဂျပုမင်းသားအိုကို ပိုက်ဆံတွေပုံပေးကြော်ငြာရိုက်ပြီး ဒီ မင်းသား သုံးနေတဲ့အမေရိကန်ဆေးပါ ဆိုပြီး ဆိုင်ဖွင့်ပြီး မတန်တဆ ဈေးကြှီးကြီး နဲ့ဘာအာနိသင်မှမပြတဲ့ ဆေးကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဖန်တီးထားတဲ့Comment တွေပြပြီး ဂျင်းထည့် ရောင်းနေတာလည်း တွေ့ နေရပါတယ်နော် !❌🤔 =============================== 🤷‍♂️( ရပ်ကြည့်လို့ အမြတ်မရှိ ! တကယ်လုပ်မှ တကယ်ရမှာနော် ! ) 🤷‍♀️ 💪💪🥙 ကျန်းမာပြီး ခွန်အားဖြစ်စေဖို့မဖြစ်မနေ စားသောက်ရမည့် အစားအစာများ 🥙💪💪 🍉ဖရဲသီး ၊ 🥑 ထောပတ်သီး ၊ 🍌 ဖီးကြမ်း ဌက်ပျော ၊ 🍌 သီးမွှေး ဌက်ပျော ၊ 🥛 ဒိန်ချဉ် ၊ 🍡 ရုံးပတေသီး ၊ 🔅 ဂျင်း ၊ 🥕မုန်လာဥနီ ၊ 🥓 ငါးရှဉ့် ခြောက်စပ် ၊ 🥜 ဗာဏာစေ့ ၊ 🥐သစ်ကြားသီး ၊ 🥜သီဟိုစေ့ တို့ကို မိမိ တစ်ပတ် စားသောက်သည့် အစားအသောက်များထဲတွင် တစ်ရက်လျှင် အနည်းဆုံး 2️⃣ နှစ်မျိုး သို့ 3️⃣ သုံးမျိုး ပါအောင်စားပေးရပါမည် ။ 🍅 ကြက်သွန်နီ ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ခရမ်းချဉ်သီး တို့ ကို နေ့ တိုင်းထမင်းနှင့် အတူ အနည်းဆုံး 1️⃣ ကြိမ် ( နေ့ လည်စာ ) စားပေးရပါမည် ။ 1️⃣ တစ်ရက်လျှင် ရေ အနည်းဆုံး 2️⃣ နှစ်လီတာ သောက်ပေးရမည် ။ ❌ ဆေးလိပ် ၊ အရက်၊ ကွမ်း စသည်တို့ သည် ယောင်္ကျားဟော်မုန်း ၊ ယောင်္ကျားခွန်အား နှင့် စွမ်းဆောင်အားတို့ ကို ဆိုးရွားစွာကျဆင်းစေပါသဖြင့် ရှောင်ရပါမည် ။ ❎ မရှောင်နိုင်လျှင် အနည်းဆုံး 5️⃣0️⃣ % လျော့ရပါမည် ။ 🍷ဝိုင်အနီ တစ်ရက်လျှင် ဝိုင်ခွက် 2️⃣ ခွက်သောက်ပေးပါက ကောင်းပါသည် ။ 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🔴 ဆေးလိပ် ၊ အရက် ၊ ကွမ်း လုံးဝ မသုံးသူများ ပန်းသေ ၊ ပန်းညိုး ၊ သုတ်လွှတ်မြန်ခြင်းများ လုံးဝ ပျောက်ကင်းလိုပါက 🔻 " ပါဝါဟန်းနီး " 1️⃣ ဘူးသောက် " ပါဝါလိုးရှင်း " 1️⃣ ဘူး လိမ်းပေးပါရန် ။ မပျောက်ကင်းသေးပါက သောက်ဆေး 3️⃣ ဘူးအထိသောက်ပြီး လိမ်းဆေး 1️⃣ ဘူးကုန်အောင် လိမ်းလိုက်ပါက ယူပစ်သလိုသေချာပေါက် ပျောက်ပါမည် ။ ☑️အထက်တွင် ရေးတင်ပေးထားသောက် အစားအသောက်များကို ရှင်းပြထားသည့် အတိုင်း စားသောက် ပေးပါရန် အထူးလိုအပ်ပါသည် ။ 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🔴 ဆေးလိပ် ၊ အရက် ၊ ကွမ်း သုံစွဲးသူများ ပန်းသေ ၊ ပန်းညိုး ၊ သုတ်လွှတ်မြန်ခြင်းများ လုံးဝ ပျောက်ကင်းလိုပါက 🔻 " ပါဝါဟန်းနီး " 1️⃣ ဘူးသောက် " ပါဝါလိုးရှင်း " 1️⃣ ဘူး လိမ်းပေးပါရန် ။ မပျောက်ကင်းသေးပါက သောက်ဆေး 9️⃣ ဘူးအထိသောက်ပြီး လိမ်းဆေး 6️⃣ ဘူးကုန်အောင် လိမ်းလိုက်ပါက ယူပစ်သလိုသေချာပေါက် ပျောက်ပါမည် ။များသောအားဖြင့် ( 8️⃣0️⃣ % ခန့် မှာ ) 6️⃣ ဘူးသောက် 4️⃣ ဘူး လိမ်းရုံဖြင့် ရောဂါ ပျောက်သွားကြပါသည် ။ ☑️ အထက်တွင် ရေးတင်ပေးထားသောက် အစားအသောက်များကို ရှင်းပြထားသည့် အတိုင်း စားသောက် ပေးပါရန် အထူးလိုအပ်ပါသည် ။ 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🔴 ဆေးလိပ် ၊ အရက် ၊ ကွမ်း လုံးဝ မသုံးသူများ ကြီးချင် ရှည်ချင် ထွားချင်ကြပါက 🔻 ပါဝါလိုးရှင်း 1️⃣ ဘူးလိမ်း ပြီး လေစုပ်ပြွန်စက်ဖြင့် အနည်းဆုံး တနေ့2️⃣ ကြိမ် ၊ တစ်ကြိမ်လျှင် ပုံမှန် 1️⃣5️⃣ မိနစ်ခန့်ဆွဲလိုက် လွတ်လိုက် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးပါက 2️⃣ ပတ် မှ 3️⃣ ပတ်အတွင်း သိသိသာသာ ထွား / ရှည်လာပါလိမ့်မည် ။လိမ်းဆေးချည်းဘဲ သုံးပါက အနည်းဆုံး 2️⃣ လမှ 5️⃣ လအထိ တစ်နေ့2️⃣ ကြိမ် ပုံမှန်လိမ်းပေးရန် အထူးလိုအပ်ပါသည် ။ ☑️ အထက်တွင် ရေးတင်ပေးထားသောက် အစားအသောက်များကို ရှင်းပြထားသည့် အတိုင်း စားသောက် ပေးပါရန် အထူးလိုအပ်ပါသည် ။ 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🔴 ဆေးလိပ် ၊ အရက် ၊ ကွမ်း သုံးသူများ ကြီးချင် ရှည်ချင် ထွားချင်ကြပါက 🔻 ပါဝါဟန်းနီး 2️⃣ ဘူးသောက် ပါဝါလိုးရှင်း 1️⃣ ဘူးလိမ်း ပြီး လေစုပ်ပြွန်စက်ဖြင့် အနည်းဆုံး တနေ့2️⃣ ကြိမ် ၊ တစ်ကြိမ်လျှင် ပုံမှန် 1️⃣5️⃣ မိနစ်ခန့်ဆွဲလိုက် လွတ်လိုက် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးပါက 3️⃣ ပတ်မှ 5️⃣ ပတ်အတွင်း သိသိသာသာ ထွား / ရှည်လာပါလိမ့်မည် ။လိမ်းဆေးချည်းဘဲ သုံးပါက အနည်းဆုံး 2️⃣ လမှ 5️⃣ လအထိ တစ်နေ့2️⃣ ကြိမ် ပုံမှန်လိမ်းပေးရန် အထူးလိုအပ်ပါသည် ။ ☑️ အထက်တွင် ရေးတင်ပေးထားသောက် အစားအသောက်များကို ရှင်းပြထားသည့် အတိုင်း စားသောက် ပေးပါရန် အထူးလိုအပ်ပါသည် ။ ============================== ( ရပ်ကြည့်လို့ အမြတ်မရှိ ! တကယ်လုပ်မှ တကယ်ရမှာနော် ! ) ကျပ် တစ်ထောင်တည်းနဲ့တစ်ညလုံး7ခါ 8 ခါ တောင် မမောမပန်းနဲ့လန်းလို့ ရတဲ့ တခါသုံး 💜 ယောင်္ကျား အားမာန် ပါဝါဟန်းနီး 💜 သောက်ဆေးတွေ မှာဝယ်လို့ ရပြီနော် ! ( ရပ်ကြည့် လို့ အမြတ်မရှိ ! တကယ် လုပ်မှ တကယ် ရမှာ နော် ! ) 💰ဈေးနှုန်းများ 💰 ➖➖➖➖➖ 🚩 ( ပါဝါ ဟန်းနီး ) - တဘူး 💰 16,000 ကျပ် 🚩 ( ပါဝါ လိုးရှင်း ) - တဘူး 💰 21,000 ကျပ် 🚩 လေစုပ်ပြွန်စက် - တလုံး 36,000 ကျပ် အမျိုးသမီးအင်္ဂါကျဉ်း ရောဂါကင်း မွှေးဆေး 🚩P-V Care Gel (ပီဝီကယ်ယား ဂျယ်လ်) 90ml - တဘူး 💰 21,000 ကျပ် >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ☎️ ဖုန်းနံပတ်များ 🚩 09 256070900 , 09 73206348 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ထိုင်း နဲ့မလေး မှာ အိမ်အရောက်ပို့ စန နဲ့ဝယ်လို့ ရပြီ နော် ! 👑 ယောင်္ကျား အားမာန် ပါဝါဟန်းနီး 👑 Registration Licence No: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ တိုင်းရင်းဆေးဝါး လိုင်စင် မှတ်ပုံတင်အမှတ် - TMR - 013089 နဲ့တရားဝင် မှတ်ပုံတင် ထုတ်လုပ်ထားပါတယ် ❗️ 👑 ယောင်္ကျား အားမာန် ပါဝါလိုးရှင်း 👑 Registration Licence No: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ တိုင်းရင်းဆေးဝါး လိုင်စင် မှတ်ပုံတင်အမှတ် - TMR - 013306 နဲ့ တရားဝင် မှတ်ပုံတင် ထုတ်လုပ်ထားပါတယ် ❗️ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ရိုးရိုးပစ်ချင်လား ? လောင်ချာ နဲ့ထုချင်လား ? 💢 မှတ်ချက် ။ ။ အွန်လှိုင်းပေါ်မှာ အွန်လှိုင်း လမ်းဘေးဈေးသည်တွေ ရောင်းနေကြတဲ့တရားမဝင် လေလုံးထွား ကြီးဆေး တောင်ဆေး ကြာဆေးတွေ အကုန် လုံးဝယ် သုံးကြည့် ပြီး သင့် ချွေးနည်းစာတွေကို ဖြုန်းပြီး ရောဂါ မျိုးစုံ ရအောင် အရင်ရှာပြီးမှ . . . . . 🧡💛 ဒီဆေးတွေကို သုံးကြပါနော် ! 💛🧡 😌😌 ဆီ နဲ့မြောင်းပုတ်ရေ ဘယ်လောက်ကွာလည်း ဆိုတာ ပိုသိသာသွားပါ လိမ့်မယ်နော် ! 🤮🤮 =============================== ❌🤔နာမည်ကြီး ဂျပုမင်းသားအိုကို ပိုက်ဆံတွေပုံပေးကြော်ငြာရိုက်ပြီး ဒီ မင်းသား သုံးနေတဲ့အမေရိကန်ဆေးပါ ဆိုပြီး ဆိုင်ဖွင့်ပြီး မတန်တဆ ဈေးကြှီးကြီး နဲ့ဘာအာနိသင်မှမပြတဲ့ ဆေးကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဖန်တီးထားတဲ့Comment တွေပြပြီး ဂျင်းထည့် ရောင်းနေတာလည်း တွေ့ နေရပါတယ်နော် !❌🤔 =============================== 💰ဈေးနှုန်းများ 💰 ➖➖➖➖➖ 🚩 ( ပါဝါဟန်းနီး 1000 တန် သောက်ဆေး7ဘူးပါ ) - တထုပ် 💰 7,000 ကျပ် 🚩 ( သောက်ဆေးနဲ့ပါဝါလိုးရှင်း လိမ်းဆေး တွဲပါတဲ့ 1800 တန်5ဘူးပါ ) - တထုပ် 💰 9,000 ကျပ် အူယား အသဲယား ရင်ခုန်စရာ အချစ် ဂုရုလေး - love GURU 26 Nov 2020 · 272K views
ကား🚦🚘🚕🚖🇲🇲 အုံနာဘုတ် သက်သေခံကဒ်ပြား မှန်မမှန် စစ်မယ် မူရင်း ပိုင်ရှင်အား လေးစားစွာဖြင့် ‌​ရေးမယ်​​ရေးမယ်​နဲ့မ​ရေးဖြစ်​ခဲ့ပါဘူး အခု​တော့နည်းနည်း​လေး​ရေးချင်​လာလို့ပါ ကိုယ်​သိသ​လောက်​ ​မော်​​တော်​ယာဉ်​မှတ်​ပုံတင်​စာအုပ်​ (ကား owner book) နဲ့ပါတ်​သတ်​ပြီးသိသ​လောက်​​လေး​ပေါ့ တစ်​ချို့ ​တွေလည်းသိပြီးသား ဖြစ်​မှာပါ သိပြီးသူက​ကျော်​သွား​ပေါ့​နော်​ မှားတာရှိရင်​လည်းဝင်​မန့်​​ပေးပါ မှားတာလည်းပါချင်​ပါနိုင်​ပါတယ်​။ဦးဆုံး ကား owner book မှာ ​ပေါ့ chassic ခဲချစ်​တာ​လေးပါမယ်​ အဲ့ဒါလည်းအ​ရေးကြီးပါတယ်​ ကား​ဘောင်​အမှတ်​​ပေါ့ ​နောက်​သူ့မှာ hologram မှာ နံပါတ်​​လေး​တွေပါတယ်​ ဥပမာ​နောက်​ဆုံး နံပါတ်​က 48 ဆို​နောက်​ စာအုပ်​ရယ့်​ ကပ်​လျက်​​နောက်​တစ်​မျက်​နှာ က ဒုညွှန်​မှူး ဆိုင်း ​ဘေးမှာပါတယ့်​ hologram မှာပါတယ့်​ နံပါတ်​က တစ်​ခု​များပါတယ်​အဲ့နံပါတ်​​တွေက v ​နောက်​ကနံပါတ်​​တွေက ကညန ရယ့်​ ကားနဲ့ပါတ်​သတ်​တယ့်​ control code ​တွေပါ owner book မှန်​ မ မှန်​ဆိုတယ့်​အချက်​လည်းသိနိုင်​မှာပါ။ ကားပုံပါ Certificate of Vehicle Registration မှာပါတယ့်​ hologram ရယ့်​ v ​နောက်​ကပါတယ့်​နံပါတ်​​တွေဟာ ကညန ရယ့်​ computer data ထဲမှာ ကားအချက်​အလက်​​နေနဲ့ သိမ်းထားမှာပါ ​နောက်​အချက်​က v ​နောက်​ကနံပါတ်​​တွေအ​နေနဲ့ CVR မှန်​မမှန်​ကိုလည်း ကညနအ​နေနဲ့ စစ်​​ဆေးနိုင်​ပါမယ်​။​နောက်​ owner book ​ရှေ့ဆုံးနဲ့​နောက်​ဆုံး စာရွက်​နဲ့ကပ်​လျက်​မှာဆို အမည်းသား​လေးပါ အဲ့အမည်း​လေးက​တော့ တုလို့မရဘူးလို့​ပြောကြတယ်​။​နောက်​ စာအုတ်​ အလည်​ကြိုး က​ကျောက်​ကြည့်​မီးနဲ့ထိုးကြည့်​ရင်​ အဏုမြူ ​ရောင်​​လေးဖြစ်​ရပါမယ်​။အရမ်းလိုချင်​လို့ ကညန မှာမစစ်​နိုင်​လို့အချိန်​မရှိဘူးဆိုရင်​​တော့ ‌၁။stapler အရာ​လေးပါ ကနဦးမှာ CVR ကိုတွဲချုပ်​​ပေးတတ်​တယ့်​အတွက်​အရာ​လေးပါတတ်​ပါတယ်​။အချို့ ဝယ်​​ရောင်း​တွေကြည့်​ကြပါတယ်​။​အရင်​တုန်းကကား​တွေ​တော့မပါနိုင်​​လောက်​ပါဘူး​နောက်​ပိုင်းကား​တွေပါတာများပါတယ်​။ ‌၂။​ဘောင်​အမှတ်​ ကားက​ဘောင်​အမှတ်​နဲ့ကြည့်​ကြည့်​​ပေါ့။hologram serial ​လေးလည်းစစ်​ကြည့်​​ပေါ့ ‌၃။​​ရှေ့​နောက်​ အတွင်းဘက်​က အမည်းသား​လေးဖြစ်​ရပါမယ်​။​ရှေ့ပိုင်းကား​တွေက ကပ်​လျက်​ရှိ​နေတတ်​လို့ခွာကြည့်​လို့မရပါဘူး။​နောက်​ပိုင်းကား​တွေက တစ်​ဝက်​​လောက်​ကွာ​နေတတ်​လို့အလွယ်​ကြည့်​လို့ရပါတယ်​။ ‌၄။အလယ်​ကြိုး မီးထိုးကြည့်​ရင်​အဏုမြူ ​ အ​ရောင်​​လေးဖြစ်​ရမယ်​ ‌​နောက်​ဆုံးက ​တော့စိတ်​ပျက်​ဖွယ်​ရာပါ အဲ့လိုစာအုတ်​ တစ်​ပုံစံထဲ အတုရ​နေပါပြီ ခုနက အသက်​လို့ဆိုတယ့်​ v ​နောက်​ကနံပါတ်​​တွေ ဒါ​တွေက​တော့ မတူနိုင်​ပါဘူး ​ ‌​နောက်​တစ်​ခု​စေတနာနဲ့​ပြောချင်​လို့ပါ တစ်​ချို့ အ​ရောင်းpost ​တွေမှာ​တွေ့​တွေ့​နေလို့ပါ ဘာလို့ cvr မှာပါတယ့်​ hologram နံပါတ်​​တွေကိုကားနဲ့အတူဘာလို့ပြပြ​နေကျတာလဲလို့ပါ အလွယ်​ကူးလို့ရသွားပြီ ​ဘောင်​အမှတ်​လည်းပါ hologram က v ​နောက်​ကနံပါတ်​လည်းပါ​တော့ ပွားချင်​ရင်​ ​ရေကန်​အသင့်​ ကြာအသင့့်​​ပေါ့ ဘာလို့မြန်း​ဖော်​ပြ​နေကျလည်းမသိဘူး ဘယ်​သူမှလည်းရိုက်​မစစ်​ပဲနဲ့​လေ။ ‌​နောက်​ Certificate of Vehicle Registrationအလွယ်​ ​ခေါ် wheel tax ​ပေါ့ ဓာတ်​ပုံပါတယ့်​ဟာ​လေးပါ အဲ့ဒါ​လေးက​တော့အ​ပေါ်မှာ​ပြောထားတယ့်​ hologram က v ​နောက်​ကပါတယ့်​နံပါတ်​ အ​ရေးကြီးပါတယ်​ ကညန က computer မှာ ကားအချက်​အလက်​နဲ့ပါတ်​ သတ်​လို့ ​​ဖော်​ပြ​ပေးမှာပါ ​နောက်​ပုံမှာပြထားတယ့်​အတိုင်း ​ကျောက်​ကြည့်​မီးနဲ့ထိုးရင်​ ​ရေစာလိုမျိူး​လေး​ပေါ်ပါတယ်​ ​နောက်​တစ်​ချက်​က ကားအသစ်​ဆို stapler ရာ​လေး​ပေါ့ ဒါ​လေးလဲသတိပြုရမှာပါ။ကနဦးက​တော့ HQ ​နောက်​ သက်​ဆိုင်​ရာ တိုင်းအလိုက်​​ပေါ့ YGN/ MDY စသည်​ဖြင့်​​ပေါ့ ​နောက်​ type ရိုက်​တယ့်​စာ​ကြောင်းအများစုက အ​စစ်​က လှိုင်းအ​ပေါ်တိတိကျကျ မ ရိုက်​ထားတတ်​ပါဘူး စာ​ကြောင်းလွဲတတ်​ပါတယ်​ အများစုပါ တစ်​ချို့cvr ​တွေလည်းသူ့လှိုင်းနဲ့သူကျပါတယ်​ အများစုက စာ​ကြောင်းလွဲ​နေတာများပါတယ်​။​နောက်​မသပ်​ရတ်​တယ့်​အတု​တွေက​တော့ CVR ​နောက်​ခံ လှိုင်း​လေး​တွေကထင်းလွန်းတာ မသပ်​ရတ်​တာ​တွေဖြစ်​တတ်​ပါတယ်​​နောက်​ဘက်​ ကညန logo ဝိုင်းကလည်းခပ်​မှိန်​မှိန်​မဟုတ်​ပဲထင်းလွန်းတတ်​ပါတယ်​။​နောက်​ကား ပုံပါ မသပ်​ရတ်​တယ့်​ အတုဆို ဖြတ်​ညှပ်​ပုံစံမျိူးဖြစ်​တတ်​ပါတယ်​။ ‌ကညန hologram ကလည်း ​သေ​သေချာချာကြည့်​ရင်​ ကညန ဆိုတယ့်​ logo ​လေး​တွေ ကညန အဝိုင်း logo ​တွေပါပါတယ်​ စာအုပ်​က hologram နဲ့ CVR hologram နဲ့က​သေ​သေချာချာကြည့်​ရင်​ပုံစံမတူပါဘူး Owner book က ၂ ခုကတူပါတယ်​။ ‌စိတ်​ညစ်​ဖွယ်​ရာက​တော့ တစ်​ပုံစံထဲအတုလုပ်​လို့ရပါတယ်​ ၂ သိန်းခွဲပါ။ ‌​နောက်​ owner book type ရိုက်​ထားတာဖြစ်​လို့ type စာလုံး​တွေက စာရွက် ကိုကိုင်​ကြည့်​ရင်​သိနိုင်​ပါတယ်​။ ‌​နောက်​ premium စာအုပ်​ မှာက စာအုပ်​အသစ်​​ နံပါတ်​ အသစ်​ဆို ကညန po စလစ်​ပါပါတယ်​ နောက်တစ်ခုက ၁.၇.၂၀၁၆ ကလို့ထင်တာပဲ ကားမှန်တွေမှာ vehicle inspection sticker လေးတွေကပ်ပေးပါတယ် ထုံးစံအတိုင်း တစ်ပုံစံထဲအတုရပါတယ် ။နောက် နံပါတ်ပြား စာလုံးပေါ်မှာ RTAD ဆိုတာလေးတွေပါပါတယ် နံပါတ်ပြား lock သီး ကညန အဆိုဖြုတ်လို့မရပါတယ့် ထုံးစံအတိုင်း တစ်ပုံစံထဲအတုရပါတယ် မီးထိုးခံအစစ်ခံဆိုပြီး လုပ်ပေးတယ့်သူတွေရှိပါတယ် CVR သပ်သပ်ဆို ၂ သိန်းခွဲ အကုန်​ပါတစ်စုံ ကို ၁၅ သိန်းခွဲပေါက်ဈေးရှိပါတယ် အာမခံနဲ့လုပ်ပေးကျတာပါ quality လျော့ရင်တော့သက်သာပါမယ် အချုပ်ဆိုရရင် license car မတတ်နိုင်လို့ အလွတ်စီးမယ်ဆိုစီးပေါ့တရားမဝင်ဖြစ်လို့ ဖမ်းစီးခံရနိုင်တယ် ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ်ရေးပေါ့ ဒါပေမယ့် without ကို lic car ပြောရောင်းပြီးထည့်တာတော့လွန်သွားပြီ ပေါ့ မသိနားမလည်တယ့်သူ ကို မလုပ်သင့်ပါဘူး ဆုံးရှုံးမူအပြင် ကားထိုးပေးလ်ိုက်လို့ပြီးတာမဟုတ်ဘူး အရေးယူခံရမှာပါ။ရေးတာလည်းရှည်သွားပြီဆိုတော့ နောက်အကြောင်းအရာပြောချင်ပေမယ့် မရေးနိုင်တော့ဘူး ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပါ welcome all friend ပါ နောက်တစ်ခုက 1A ကနေ 9K အထိ car number သာ cb မှာပို့လိုက်ပါ ကျွန်တော့ list ထဲမှာရှိရင် ကားအမျိူးအစား chassic ရှေ့/ အရောင် /လိပ်စာ တွေကို အချိန်ရရင်ပြန်ပို့ပေးပါမယ်။ကားဝယ်​မယ်​ဆိုတန်​ဖိုးမြင့်​ ဥပမာ wish pajero landcruiser mark2စသည်​စသည်​​ပေါ့ ဝယ်​မယ်​ဆို ကညန မှာမှန်​မမှန်​ စစ်​သင့်​ပါတယ်​ ။​ခွေးဘီလူး လိုဆိုရင်​​တော့ သိပ်​မလိုပါဘူး အလွတ်​က ၂၅ + ၁၅ ဆို​တော့အဲ့​လောက်​က​တော့ဘယ်​သူမှ လုပ်​မယ်​မထင်​ပါဘူး တန်​ဖိုးမြင့်​ကား​တွေအ​နေနဲ့က​တော့ စစ်​​ဆေးသင့်​ပါတယ်​လို့အကြံ​ပေးပါရ​စေ။ မှတ်​ချက်​ = ကားအားလုံးကိုမဆိုလိုပါဘူး သတိထားနိုင်​ဖို့အတွက်​ပါ။​တော်​ကြာ အဆဲခံ​နေရမှဖြင့်​ :) Copy from zar ni >ဝှီးတက် က လက်မှတ် နဲ့ owner book က နောက်ဆုံး လိုင်စင် ဝင် တဲ့ လက်မှတ် တူရ ပါ မယ် (ရုံးအားလုံးကို မဆိုလို)
ကား🚦🚘🚕🚖🇲🇲 အုံနာဘုတ် သက်သေခံကဒ်ပြား မှန်မမှန် စစ်မယ် မူရင်း ပိုင်ရှင်အား လေးစားစွာဖြင့် ‌​ရေးမယ်​​ရေးမယ်​နဲ့မ​ရေးဖြစ်​ခဲ့ပါဘူး အခု​တော့နည်းနည်း​လေး​ရေးချင်​လာလို့ပါ ကိုယ်​သိသ​လောက်​ ​မော်​​တော်​ယာဉ်​မှတ်​ပုံတင်​စာအုပ်​ (ကား owner book) နဲ့ပါတ်​သတ်​ပြီးသိသ​လောက်​​လေး​ပေါ့ တစ်​ချို့ ​တွေလည်းသိပြီးသား ဖြစ်​မှာပါ သိပြီးသူက​ကျော်​သွား​ပေါ့​နော်​ မှားတာရှိရင်​လည်းဝင်​မန့်​​ပေးပါ မှားတာလည်းပါချင်​ပါနိုင်​ပါတယ်​။ဦးဆုံး ကား owner book မှာ ​ပေါ့ chassic ခဲချစ်​တာ​လေးပါမယ်​ အဲ့ဒါလည်းအ​ရေးကြီးပါတယ်​ ကား​ဘောင်​အမှတ်​​ပေါ့ ​နောက်​သူ့မှာ hologram မှာ နံပါတ်​​လေး​တွေပါတယ်​ ဥပမာ​နောက်​ဆုံး နံပါတ်​က 48 ဆို​နောက်​ စာအုပ်​ရယ့်​ ကပ်​လျက်​​နောက်​တစ်​မျက်​နှာ က ဒုညွှန်​မှူး ဆိုင်း ​ဘေးမှာပါတယ့်​ hologram မှာပါတယ့်​ နံပါတ်​က တစ်​ခု​များပါတယ်​အဲ့နံပါတ်​​တွေက v ​နောက်​ကနံပါတ်​​တွေက ကညန ရယ့်​ ကားနဲ့ပါတ်​သတ်​တယ့်​ control code ​တွေပါ owner book မှန်​ မ မှန်​ဆိုတယ့်​အချက်​လည်းသိနိုင်​မှာပါ။ ကားပုံပါ Certificate of Vehicle Registration မှာပါတယ့်​ hologram ရယ့်​ v ​နောက်​ကပါတယ့်​နံပါတ်​​တွေဟာ ကညန ရယ့်​ computer data ထဲမှာ ကားအချက်​အလက်​​နေနဲ့ သိမ်းထားမှာပါ ​နောက်​အချက်​က v ​နောက်​ကနံပါတ်​​တွေအ​နေနဲ့ CVR မှန်​မမှန်​ကိုလည်း ကညနအ​နေနဲ့ စစ်​​ဆေးနိုင်​ပါမယ်​။​နောက်​ owner book ​ရှေ့ဆုံးနဲ့​နောက်​ဆုံး စာရွက်​နဲ့ကပ်​လျက်​မှာဆို အမည်းသား​လေးပါ အဲ့အမည်း​လေးက​တော့ တုလို့မရဘူးလို့​ပြောကြတယ်​။​နောက်​ စာအုတ်​ အလည်​ကြိုး က​ကျောက်​ကြည့်​မီးနဲ့ထိုးကြည့်​ရင်​ အဏုမြူ ​ရောင်​​လေးဖြစ်​ရပါမယ်​။အရမ်းလိုချင်​လို့ ကညန မှာမစစ်​နိုင်​လို့အချိန်​မရှိဘူးဆိုရင်​​တော့ ‌၁။stapler အရာ​လေးပါ ကနဦးမှာ CVR ကိုတွဲချုပ်​​ပေးတတ်​တယ့်​အတွက်​အရာ​လေးပါတတ်​ပါတယ်​။အချို့ ဝယ်​​ရောင်း​တွေကြည့်​ကြပါတယ်​။​အရင်​တုန်းကကား​တွေ​တော့မပါနိုင်​​လောက်​ပါဘူး​နောက်​ပိုင်းကား​တွေပါတာများပါတယ်​။ ‌၂။​ဘောင်​အမှတ်​ ကားက​ဘောင်​အမှတ်​နဲ့ကြည့်​ကြည့်​​ပေါ့။hologram serial ​လေးလည်းစစ်​ကြည့်​​ပေါ့ ‌၃။​​ရှေ့​နောက်​ အတွင်းဘက်​က အမည်းသား​လေးဖြစ်​ရပါမယ်​။​ရှေ့ပိုင်းကား​တွေက ကပ်​လျက်​ရှိ​နေတတ်​လို့ခွာကြည့်​လို့မရပါဘူး။​နောက်​ပိုင်းကား​တွေက တစ်​ဝက်​​လောက်​ကွာ​နေတတ်​လို့အလွယ်​ကြည့်​လို့ရပါတယ်​။ ‌၄။အလယ်​ကြိုး မီးထိုးကြည့်​ရင်​အဏုမြူ ​ အ​ရောင်​​လေးဖြစ်​ရမယ်​ ‌​နောက်​ဆုံးက ​တော့စိတ်​ပျက်​ဖွယ်​ရာပါ အဲ့လိုစာအုတ်​ တစ်​ပုံစံထဲ အတုရ​နေပါပြီ ခုနက အသက်​လို့ဆိုတယ့်​ v ​နောက်​ကနံပါတ်​​တွေ ဒါ​တွေက​တော့ မတူနိုင်​ပါဘူး ​ ‌​နောက်​တစ်​ခု​စေတနာနဲ့​ပြောချင်​လို့ပါ တစ်​ချို့ အ​ရောင်းpost ​တွေမှာ​တွေ့​တွေ့​နေလို့ပါ ဘာလို့ cvr မှာပါတယ့်​ hologram နံပါတ်​​တွေကိုကားနဲ့အတူဘာလို့ပြပြ​နေကျတာလဲလို့ပါ အလွယ်​ကူးလို့ရသွားပြီ ​ဘောင်​အမှတ်​လည်းပါ hologram က v ​နောက်​ကနံပါတ်​လည်းပါ​တော့ ပွားချင်​ရင်​ ​ရေကန်​အသင့်​ ကြာအသင့့်​​ပေါ့ ဘာလို့မြန်း​ဖော်​ပြ​နေကျလည်းမသိဘူး ဘယ်​သူမှလည်းရိုက်​မစစ်​ပဲနဲ့​လေ။ ‌​နောက်​ Certificate of Vehicle Registrationအလွယ်​ ​ခေါ် wheel tax ​ပေါ့ ဓာတ်​ပုံပါတယ့်​ဟာ​လေးပါ အဲ့ဒါ​လေးက​တော့အ​ပေါ်မှာ​ပြောထားတယ့်​ hologram က v ​နောက်​ကပါတယ့်​နံပါတ်​ အ​ရေးကြီးပါတယ်​ ကညန က computer မှာ ကားအချက်​အလက်​နဲ့ပါတ်​ သတ်​လို့ ​​ဖော်​ပြ​ပေးမှာပါ ​နောက်​ပုံမှာပြထားတယ့်​အတိုင်း ​ကျောက်​ကြည့်​မီးနဲ့ထိုးရင်​ ​ရေစာလိုမျိူး​လေး​ပေါ်ပါတယ်​ ​နောက်​တစ်​ချက်​က ကားအသစ်​ဆို stapler ရာ​လေး​ပေါ့ ဒါ​လေးလဲသတိပြုရမှာပါ။ကနဦးက​တော့ HQ ​နောက်​ သက်​ဆိုင်​ရာ တိုင်းအလိုက်​​ပေါ့ YGN/ MDY စသည်​ဖြင့်​​ပေါ့ ​နောက်​ type ရိုက်​တယ့်​စာ​ကြောင်းအများစုက အ​စစ်​က လှိုင်းအ​ပေါ်တိတိကျကျ မ ရိုက်​ထားတတ်​ပါဘူး စာ​ကြောင်းလွဲတတ်​ပါတယ်​ အများစုပါ တစ်​ချို့cvr ​တွေလည်းသူ့လှိုင်းနဲ့သူကျပါတယ်​ အများစုက စာ​ကြောင်းလွဲ​နေတာများပါတယ်​။​နောက်​မသပ်​ရတ်​တယ့်​အတု​တွေက​တော့ CVR ​နောက်​ခံ လှိုင်း​လေး​တွေကထင်းလွန်းတာ မသပ်​ရတ်​တာ​တွေဖြစ်​တတ်​ပါတယ်​​နောက်​ဘက်​ ကညန logo ဝိုင်းကလည်းခပ်​မှိန်​မှိန်​မဟုတ်​ပဲထင်းလွန်းတတ်​ပါတယ်​။​နောက်​ကား ပုံပါ မသပ်​ရတ်​တယ့်​ အတုဆို ဖြတ်​ညှပ်​ပုံစံမျိူးဖြစ်​တတ်​ပါတယ်​။ ‌ကညန hologram ကလည်း ​သေ​သေချာချာကြည့်​ရင်​ ကညန ဆိုတယ့်​ logo ​လေး​တွေ ကညန အဝိုင်း logo ​တွေပါပါတယ်​ စာအုပ်​က hologram နဲ့ CVR hologram နဲ့က​သေ​သေချာချာကြည့်​ရင်​ပုံစံမတူပါဘူး Owner book က ၂ ခုကတူပါတယ်​။ ‌စိတ်​ညစ်​ဖွယ်​ရာက​တော့ တစ်​ပုံစံထဲအတုလုပ်​လို့ရပါတယ်​ ၂ သိန်းခွဲပါ။ ‌​နောက်​ owner book type ရိုက်​ထားတာဖြစ်​လို့ type စာလုံး​တွေက စာရွက် ကိုကိုင်​ကြည့်​ရင်​သိနိုင်​ပါတယ်​။ ‌​နောက်​ premium စာအုပ်​ မှာက စာအုပ်​အသစ်​​ နံပါတ်​ အသစ်​ဆို ကညန po စလစ်​ပါပါတယ်​ နောက်တစ်ခုက ၁.၇.၂၀၁၆ ကလို့ထင်တာပဲ ကားမှန်တွေမှာ vehicle inspection sticker လေးတွေကပ်ပေးပါတယ် ထုံးစံအတိုင်း တစ်ပုံစံထဲအတုရပါတယ် ။နောက် နံပါတ်ပြား စာလုံးပေါ်မှာ RTAD ဆိုတာလေးတွေပါပါတယ် နံပါတ်ပြား lock သီး ကညန အဆိုဖြုတ်လို့မရပါတယ့် ထုံးစံအတိုင်း တစ်ပုံစံထဲအတုရပါတယ် မီးထိုးခံအစစ်ခံဆိုပြီး လုပ်ပေးတယ့်သူတွေရှိပါတယ် CVR သပ်သပ်ဆို ၂ သိန်းခွဲ အကုန်​ပါတစ်စုံ ကို ၁၅ သိန်းခွဲပေါက်ဈေးရှိပါတယ် အာမခံနဲ့လုပ်ပေးကျတာပါ quality လျော့ရင်တော့သက်သာပါမယ် အချုပ်ဆိုရရင် license car မတတ်နိုင်လို့ အလွတ်စီးမယ်ဆိုစီးပေါ့တရားမဝင်ဖြစ်လို့ ဖမ်းစီးခံရနိုင်တယ် ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ်ရေးပေါ့ ဒါပေမယ့် without ကို lic car ပြောရောင်းပြီးထည့်တာတော့လွန်သွားပြီ ပေါ့ မသိနားမလည်တယ့်သူ ကို မလုပ်သင့်ပါဘူး ဆုံးရှုံးမူအပြင် ကားထိုးပေးလ်ိုက်လို့ပြီးတာမဟုတ်ဘူး အရေးယူခံရမှာပါ။ရေးတာလည်းရှည်သွားပြီဆိုတော့ နောက်အကြောင်းအရာပြောချင်ပေမယ့် မရေးနိုင်တော့ဘူး ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပါ welcome all friend ပါ နောက်တစ်ခုက 1A ကနေ 9K အထိ car number သာ cb မှာပို့လိုက်ပါ ကျွန်တော့ list ထဲမှာရှိရင် ကားအမျိူးအစား chassic ရှေ့/ အရောင် /လိပ်စာ တွေကို အချိန်ရရင်ပြန်ပို့ပေးပါမယ်။ကားဝယ်​မယ်​ဆိုတန်​ဖိုးမြင့်​ ဥပမာ wish pajero landcruiser mark2စသည်​စသည်​​ပေါ့ ဝယ်​မယ်​ဆို ကညန မှာမှန်​မမှန်​ စစ်​သင့်​ပါတယ်​ ။​ခွေးဘီလူး လိုဆိုရင်​​တော့ သိပ်​မလိုပါဘူး အလွတ်​က ၂၅ + ၁၅ ဆို​တော့အဲ့​လောက်​က​တော့ဘယ်​သူမှ လုပ်​မယ်​မထင်​ပါဘူး တန်​ဖိုးမြင့်​ကား​တွေအ​နေနဲ့က​တော့ စစ်​​ဆေးသင့်​ပါတယ်​လို့အကြံ​ပေးပါရ​စေ။ မှတ်​ချက်​ = ကားအားလုံးကိုမဆိုလိုပါဘူး သတိထားနိုင်​ဖို့အတွက်​ပါ။​တော်​ကြာ အဆဲခံ​နေရမှဖြင့်​ :) Copy from zar ni >ဝှီးတက် က လက်မှတ် နဲ့ owner book က နောက်ဆုံး လိုင်စင် ဝင် တဲ့ လက်မှတ် တူရ ပါ မယ် (ရုံးအားလုံးကို မဆိုလို) ZWE family , ကား အရောင်း အဝယ် နှင့် ကား အကြောင်း သိကောင်း စရာ 16 Jun 2017 · 21K views
အမျိုးသားများအတွက် မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Biomanix ဆိုတဲ့👈👈👈👍👍👍👍 ဆေးစွမ်းကောင်းတလက်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော် ဆရာဝန်တွေကပါအရမ်းကောင်းကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတယ်နော် ဤဆေးသည် အမျိုးသားလိင်အင်္ဂါသေး / လိင်အင်္ဂါ တို သူများအတွက်အထူးသင့်လျှော်သော ဆေးဖြစ်ပါတယ်။Maca 250mg /Ginseng Blend 125mg ပါဝင်လို့ဆေးအစွမ်းကတော့ ကြာစေ။ ကြီးစေ။ ရှည်စေသည်။ Biomanix👉120000ကျပ်​👈လက်​​ဆောင်​(1်​) ကြာ​ဆေး ၊​ဆော်​ဖိး​ဆေး၊လိမ်း​ဆေးလူး​ဆေး ​ပေးပါသည်​🎁🎁🎁🎁 ☎☎☎09-403246748.​နေမင်းခန့်​(Viber) ပုံမှန်သောက်ပေးခြင်းဖြင့်ပန်းသေပန်းညိုးဖြစ်နေသူများလည်း ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေပြီးအတိုင်းတာတစ်ခုသို့ရောက်ရှိစေနိုင်သည်။ .လနဲ့ချီစောင့်ရန်မလိုဘဲ.ရက်ပိုင်းအတွင်းမိမိ၏လိင်တံကိုသိသိသာသာ...ကြီးရှည်ထွက်လာပါသည်၊၊နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာဖြစ်သည့်အတွက်...ဆေးသောက်သုံးစဉ်..ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊.ရင်တုန်ခြင်း၊မဖြစ်ဘဲ..ဦးနောက်နဲ့အာရုံကြောကိုကြည်လင်လန်းဆန်းစေပါသည်... သုတ်လွတ်မြန်သူ.ပန်းသေပန်းညိုးဖြစ်သူများ..!လိင်တံပင်ကိုယ်သေး နေသူများအတွက်..အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာထွားကြိုင်းသန်မာသော.. လိင်တံ ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာဖို့...အထူးအာမခံရောင်းချပေးနေပါပြီ.. .ဆေးမသောက်တော့တဲ့အချိန်မှာ.လိင်တံဟာပြန်သေးသွားခြင်းတိုသွားခြင်းမရှိဘဲ...ထာဝရ..ကြီးရှည်ဆေးဖြစ်ကြောင်းအာမခံပါသည် 👆👆👆👆👆👆 ဆေးရဲ့အကျိုးရလဒ်ကတော့ နေ့စဉ်မှန်မှန်သောက်သုံးပေးခြင်းအားဖြင့် ၁ ။လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးမှာ အဖက်ဖက်ကနေ တိုးတက်မှုရှိစေခြင်း။ ၂။ အမျိုးသားတွေရဲ့သုတ်ကောင်ရေကို တိုးတက်စေခြင်း။ ၃။ လိင်တံကို အရွယ်အစားရော အရှည်ပါ တိုးတက်စေခြင်း။ ၄။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအားနဲ့ အတက်အကျ အနိမ့်အမြင့်ကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ခြင်း။ ၅။ လိင်အင်္ဂါသို့သွားသည့် သွေးလည်ပတ်မှုကိုတိုးတက်စေခြင်း။ ၆။ ဟော်မုန်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကို အထူးတိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်း။ ၇။ သက်လုံအားကို အထူးကောင်းမွန်စေပြီး လိင်ဆက်ဆံရာမှာ အကောင်းမွန်ဆုံးအထိအတွေ့ကို ကြာရှည်စေခြင်း။ ခနတာအတွက် မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ ရေရှည်အတွက်စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်အဝရရှိစေမဲ့ဆေးစွမ်းကောင်းတလက်ပါ Customer တွေရဲ့ ထောက်ခံချက်အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ ကမ္ဘာ့နံပါတ် ( 1 ) လူကြိုက်အများဆုံးဆေးစွမ်းကောင်းတလက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကို စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်အဝရရှိစေမှာ အသေအချာပဲမို့ အိမ်ထောင်ရေးသုခ အပြည့်အဝရရှိစေမှာပါside ffect လုံးဝမရှိပါဘူးခင်ဗျာ သောက်သုံးနည်း တစ်နေ့ ၁ကြိမ်သောက်သုံးပေးယုံဖြင့် လိင်အင်္ဂါကိုသိသာစွာပြောင်းလဲစေပါသည်။သဘာဝ ဆေးမြစ်များဖြင့်ဖော်စပ်ထားသောကြောင့် ဘေးအန္တရာယ်မရှိကောင်း(Side Effect) ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး..(လုံးဝ)လုံးဝမရှိကြောင်းအာမခံပါသည်...👍👍 ​ဆေးအစစ်​ကို​သောက်​သုံးခြင်းဖြင့်​ ထာဝရ ကြိးရှည်​​နေမယ့်​ လိင်​တံပိုင်​ရှင်​ဖြစ်​ဖို့ အခုဘဲဆတ်​သွယ်​မှာယူပါလို့ တိုက်​တွန်းလိုက်​ပါရ​စေ လူကြိးမင်းများမှာယူမယ်​ဆို ☎☎☎09-403246748.​နေမင်းခန့်​(Viber)ဆတ်​သွယ်​လိုက်​ပါ ​Biomanix👉120000ကျပ်​👈လက်​​ဆောင်​ ကြာ​ဆေး၊​ဆော်​ဖိး​ဆေး ၊လိမ်း​ဆေးလူး​ဆေး ​ပေးပါသည်​။ မြို့များစွာအမြန်​​ချောပိုနှင့်​ ကားဂိတ်​က​နေပို့​ပေးပါသည်​။ ပစ္စည်း​ရောက်​​ငွေ​ချေပါ။
အမျိုးသားများအတွက် မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Biomanix ဆိုတဲ့👈👈👈👍👍👍👍 ဆေးစွမ်းကောင်းတလက်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော် ဆရာဝန်တွေကပါအရမ်းကောင်းကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတယ်နော် ဤဆေးသည် အမျိုးသားလိင်အင်္ဂါသေး / လိင်အင်္ဂါ တို သူများအတွက်အထူးသင့်လျှော်သော ဆေးဖြစ်ပါတယ်။Maca 250mg /Ginseng Blend 125mg ပါဝင်လို့ဆေးအစွမ်းကတော့ ကြာစေ။ ကြီးစေ။ ရှည်စေသည်။ Biomanix👉120000ကျပ်​👈လက်​​ဆောင်​(1်​) ကြာ​ဆေး ၊​ဆော်​ဖိး​ဆေး၊လိမ်း​ဆေးလူး​ဆေး ​ပေးပါသည်​🎁🎁🎁🎁 ☎☎☎09-403246748.​နေမင်းခန့်​(Viber) ပုံမှန်သောက်ပေးခြင်းဖြင့်ပန်းသေပန်းညိုးဖြစ်နေသူများလည်း ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေပြီးအတိုင်းတာတစ်ခုသို့ရောက်ရှိစေနိုင်သည်။ .လနဲ့ချီစောင့်ရန်မလိုဘဲ.ရက်ပိုင်းအတွင်းမိမိ၏လိင်တံကိုသိသိသာသာ...ကြီးရှည်ထွက်လာပါသည်၊၊နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာဖြစ်သည့်အတွက်...ဆေးသောက်သုံးစဉ်..ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊.ရင်တုန်ခြင်း၊မဖြစ်ဘဲ..ဦးနောက်နဲ့အာရုံကြောကိုကြည်လင်လန်းဆန်းစေပါသည်... သုတ်လွတ်မြန်သူ.ပန်းသေပန်းညိုးဖြစ်သူများ..!လိင်တံပင်ကိုယ်သေး နေသူများအတွက်..အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာထွားကြိုင်းသန်မာသော.. လိင်တံ ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာဖို့...အထူးအာမခံရောင်းချပေးနေပါပြီ.. .ဆေးမသောက်တော့တဲ့အချိန်မှာ.လိင်တံဟာပြန်သေးသွားခြင်းတိုသွားခြင်းမရှိဘဲ...ထာဝရ..ကြီးရှည်ဆေးဖြစ်ကြောင်းအာမခံပါသည် 👆👆👆👆👆👆 ဆေးရဲ့အကျိုးရလဒ်ကတော့ နေ့စဉ်မှန်မှန်သောက်သုံးပေးခြင်းအားဖြင့် ၁ ။လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးမှာ အဖက်ဖက်ကနေ တိုးတက်မှုရှိစေခြင်း။ ၂။ အမျိုးသားတွေရဲ့သုတ်ကောင်ရေကို တိုးတက်စေခြင်း။ ၃။ လိင်တံကို အရွယ်အစားရော အရှည်ပါ တိုးတက်စေခြင်း။ ၄။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအားနဲ့ အတက်အကျ အနိမ့်အမြင့်ကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ခြင်း။ ၅။ လိင်အင်္ဂါသို့သွားသည့် သွေးလည်ပတ်မှုကိုတိုးတက်စေခြင်း။ ၆။ ဟော်မုန်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကို အထူးတိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်း။ ၇။ သက်လုံအားကို အထူးကောင်းမွန်စေပြီး လိင်ဆက်ဆံရာမှာ အကောင်းမွန်ဆုံးအထိအတွေ့ကို ကြာရှည်စေခြင်း။ ခနတာအတွက် မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ ရေရှည်အတွက်စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်အဝရရှိစေမဲ့ဆေးစွမ်းကောင်းတလက်ပါ Customer တွေရဲ့ ထောက်ခံချက်အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ ကမ္ဘာ့နံပါတ် ( 1 ) လူကြိုက်အများဆုံးဆေးစွမ်းကောင်းတလက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကို စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်အဝရရှိစေမှာ အသေအချာပဲမို့ အိမ်ထောင်ရေးသုခ အပြည့်အဝရရှိစေမှာပါside ffect လုံးဝမရှိပါဘူးခင်ဗျာ သောက်သုံးနည်း တစ်နေ့ ၁ကြိမ်သောက်သုံးပေးယုံဖြင့် လိင်အင်္ဂါကိုသိသာစွာပြောင်းလဲစေပါသည်။သဘာဝ ဆေးမြစ်များဖြင့်ဖော်စပ်ထားသောကြောင့် ဘေးအန္တရာယ်မရှိကောင်း(Side Effect) ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး..(လုံးဝ)လုံးဝမရှိကြောင်းအာမခံပါသည်...👍👍 ​ဆေးအစစ်​ကို​သောက်​သုံးခြင်းဖြင့်​ ထာဝရ ကြိးရှည်​​နေမယ့်​ လိင်​တံပိုင်​ရှင်​ဖြစ်​ဖို့ အခုဘဲဆတ်​သွယ်​မှာယူပါလို့ တိုက်​တွန်းလိုက်​ပါရ​စေ လူကြိးမင်းများမှာယူမယ်​ဆို ☎☎☎09-403246748.​နေမင်းခန့်​(Viber)ဆတ်​သွယ်​လိုက်​ပါ ​Biomanix👉120000ကျပ်​👈လက်​​ဆောင်​ ကြာ​ဆေး၊​ဆော်​ဖိး​ဆေး ၊လိမ်း​ဆေးလူး​ဆေး ​ပေးပါသည်​။ မြို့များစွာအမြန်​​ချောပိုနှင့်​ ကားဂိတ်​က​နေပို့​ပေးပါသည်​။ ပစ္စည်း​ရောက်​​ငွေ​ချေပါ။ အမျိုးသား အားတိုးဆေး 10 Jul 2018 · 15K views